1 Samueri 8:1-22
8 Zvino Samueri paakanga angokwegura, akagadza+ vanakomana vake kuti vave vatongi vaIsraeri. 2 Dangwe rake rainzi Joeri,+ uye wechipiri ainzi Abhija;+ vaitonga muBheeri-shebha. 3 Vanakomana vake havana kufamba munzira dzake,+ asi vakanga vachida kutevera mubereko usina kururama+ uye vaigamuchira pfumbamuromo+ votsaudzira pakutonga.+ 4 Kwapera nguva yakati, varume vakuru vose vaIsraeri+ vakaungana, vakaenda kwaiva naSamueri kuRama, 5 vakati kwaari: “Tarirai! Imi makwegura, asi vanakomana venyu havana kufamba munzira dzenyu. Zvino tigadzirei mambo+ kuti atitonge semamwe marudzi ose.” 6 Asi chinhu chacho chaiva chakaipa kuna Samueri zvavakanga vati: “Tipei mambo kuti atitonge,” uye Samueri akatanga kunyengetera kuna Jehovha.+ 7 Jehovha akabva ati kuna Samueri:+ “Teerera inzwi revanhu pane zvose zvavanokuudza;+ nokuti havana kuramba iwe, asi varamba ini kuti ndive mambo+ wavo. 8 Maererano nezvinhu zvavo zvose zvavakaita kubvira pazuva randakavabudisa muIjipiti+ kusvikira nhasi pakuti vakaramba vachindisiya+ uye vachishumira vamwe vanamwari,+ ndizvo zvavari kukuitirawo. 9 Zvino teerera inzwi ravo. Asi ingovanyevera kwazvo nezvechinhu ichi, uvaudze kodzero yamambo achavatonga.”+ 10 Naizvozvo Samueri akataura mashoko ose aJehovha kuvanhu vakanga vachimukumbira mambo. 11 Akati: “Iyi ndiyo kodzero+ yamambo achakutongai: Achatora vanakomana venyu+ ovaisa mungoro dzake+ nepakati pevatasvi vake vemabhiza+ kuti vave vake, uye vamwe vachafanira kumhanya pamberi pengoro dzake;+ 12 achagadza vakuru vezviuru+ nevakuru vemakumi mashanu,+ uye vamwe kuti vamurimire+ nokumukohwera goho rake+ nokugadzira zvombo zvake zvehondo+ nezvishandiswa zvengoro dzake.+ 13 Achatora vanasikana venyu kuti vave vavhenganisi vemafuta okuzora nevabiki vezvokudya nevabiki vechingwa.+ 14 Achatora minda yenyu neminda yenyu yemizambiringa+ neminda yenyu yemiorivhi,+ yakanaka kupfuura yose, oipa vashandi vake. 15 Achatora chegumi+ cheminda yenyu yembeu necheminda yenyu yemizambiringa, uye achazvipa machinda+ ake nevashandi vake. 16 Achatora vashandirume venyu nevashandikadzi venyu nemombe dzenyu dzakanaka kupfuura dzose, achatora mbongoro dzenyu, uye achazvishandisira basa rake.+ 17 Achatora chegumi chemapoka enyu ezvipfuwo,+ uye imi muchava vashandi vake. 18 Chokwadi muchachema pazuva iroro nokuda kwamambo wenyu,+ wamazvisarudzira, asi Jehovha haazokupindurii pazuva iroro.”+ 19 Zvisinei, vanhu vakaramba kuteerera inzwi raSamueri+ vakati: “Aiwa, asi tichatongwa namambo. 20 Uye isuwo, tichava semamwe marudzi ose,+ uye mambo wedu achatitonga, obuda achititungamirira, orwa hondo dzedu.” 21 Samueri akateerera mashoko ose evanhu; akabva aaudza Jehovha.+ 22 Jehovha akati kuna Samueri: “Teerera inzwi ravo, uite kuti mambo avatonge.”+ Naizvozvo Samueri akati kuvarume vaIsraeri: “Mumwe nomumwe ngaaende kuguta rake.”